ဆောင်းရာသီ 2017 နှင့် 2018 အတွက်ဆောင်းရာသီမည်သည့်အချိန်တွင်စတင်မည်နည်း။ | ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
မော်နီကာဆန် | | ခန့်မှန်းချက်
ဆောင်းရာသီဆိုတာအများအားဖြင့်အအေး၊ ဆီးနှင်းရှုခင်းများ၊ သို့သော်ဆောင်း ဦး သည်ကြာရှည်စွာရွေ့လျားနေပုံရသည်၊ ထို့နောက်ရက်အနည်းငယ်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောရက်အနည်းငယ်အနည်းငယ်ကြာလာသည်၊ သို့သော်မကြာမီသူတို့ဖြတ်သန်းလာပြီးနွေ ဦး ပေါက်ပြန်သည်။ သို့ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လမ်းပေါ်သို့ထွက်တိုင်းအချိန်တိုင်းတုန်လှုပ်စေသောဤအအေးခန်းကားအဘယ်မှာနည်း။ ယခုကျွန်ုပ်တို့အေးခဲနေသောလှိုင်းများသည်ယခင်နှင့်မတူပုံရသည်။
ဤဆောင်းပါးတွင် ၂၀၁၇ ဆောင်းရာသီ၏အခြေအနေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်သွားမည်ဖြစ်သည် ဘယ်လိုလာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆောင်းရာသီဘယ်တော့လာသလဲ ကြည့်ရအောင်
2 ဆောင်းရာသီ 2017 အကျဉ်းချုပ်
3 ဆောင်းရာသီ 2016 အကျဉ်းချုပ်
4 ဆောင်းရာသီ 2018 ဘယ်လိုဖြစ်လိမ့်မည်နည်း နောက်တစ်ခုလား။
¿ဆောင်းရာသီစတင်သောအခါ? ဆောင်းရာသီသည်များစွာသောသူတို့မျှော်လင့်သည့်ရာသီဖြစ်သည်။ ပူပြင်းသည့်နွေရာသီပြီးနောက်သင်များသောအားဖြင့်နှစ်၏အအေးဆုံးလများအမြန်ဆုံးရောက်လိုကြသည်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအခြားတုပ်ကွေးသို့မဟုတ်အအေးမိရောဂါကဲ့သို့သောအခြားရောဂါအချို့ကိုယူဆောင်လာနိုင်သော်လည်း၊ ယခုရာသီတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လမ်းများသို့မဟုတ်ကျေးလက်ဒေသများသို့ထွက်သွားပြီးဆောင်းရာသီအားကစားများတွင်ပျော်မွေ့လိုကြသည်။
သို့သော်မည်သည့်အချိန်သည်ဆောင်းကာလရောက်သနည်း။ ကောင်းပြီ သင်၌ရှိသောကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းပေါ်တွင်မူတည်သည် ။ ထို့ကြောင့်သင်သည်မြောက်ဘက်ခြမ်းသို့ရောက်နေလျှင်ပထမဆုံးတရားဝင်နေ့သည်ဒီဇင်ဘာ ၂၀၊ ၂၁ ဖြစ်ပြီး၊ သင်သည်တောင်ဘက်ခြမ်းတွင်ရှိနေစဉ်ထိုနေ့သည်ဇွန် ၂၀ ရက်သို့မဟုတ် ၂၁ ရက်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းရာသီ 2017 အကျဉ်းချုပ်
အဆိုအရ ဒေတာ နိုင်ငံတော်မိုးလေ ၀ သအေဂျင်စီ (AEMET) ၏ ၂၀၁၇ ဆောင်းရာသီ တစ် ဦး ခြုံငုံနွေးခြောက်သွေ့တဲ့ဇာတ်ကောင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပျမ်းမျှအပူချိန်မှာ ၈.၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်ပြီး၊ ရာသီဥတုမှာ ၀.၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်ပိုများသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၆၅ ခုနှစ်မှစ၍ ၁၃ ခုမြောက်အနွေးဆုံးရသောဆောင်းရာသီဖြစ်ပြီး ၂၁ ရာစုအစတွင်စတုတ္ထအပူအရှိဆုံးဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅-၁၆၊
သူတို့မှတ်ပုံတင်ခဲ့တယ် အပြုသဘောအပူကွဲလွဲချက်များ ဂယ်လီယာ၊ Catalonia၊ Balearic ကျွန်းများ၊ Valencian အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် Cantabrian၊ Iberian နှင့် Central စနစ်များ၊ +1ºCဝန်းကျင်၊ Castilla-La Mancha ၏အရှေ့တောင်ဘက်နှင့် Castilla y León၏အနောက်တောင်ဘက်။ ကျန်တိုင်းပြည်များတွင်ကွဲလွဲချက်များမှာ ၀ နှင့် ၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကြားတွင်ရှိသည်။
ကျွန်တော်တို့မိုးရေချိန်အကြောင်းပြောရင်ယေဘုယျအားဖြင့်ခြောက်သွေ့တယ်၊ ပျမ်းမျှမိုးရွာသွန်းမှုပုံမှန်အတိုင်းထက် 20% လျော့နည်းအတူအရာ 160mm ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလနှင့်ဇန်နဝါရီလသည်ခြောက်သွေ့ခဲ့သော်လည်းကျွန်းဆွယ်၏အရှေ့တောင်ဘက်နှင့် Balearic ကျွန်းများတွင်အလွန်စိုထိုင်းခဲ့သည်။ ကရာရီယန်ကျွန်းများ၊ Extremadura နှင့် Andalusia အလယ်ပိုင်းတို့တွင်အလွန်ခြောက်သွေ့သည်။
ဆောင်းရာသီ 2016 အကျဉ်းချုပ်
ဆောင်းရာသီ 2016 သည်ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက် ၂၀၁၅ တွင်စတင်ခဲ့ပြီးမတ်လ ၂၀ ရက်တွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာစိတ်ဝင်စားဖို့လအနည်းငယ်, သောအတွက်ဖြစ်ခဲ့သည် မှတ်တမ်းများမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်မိုးရေချိန်နှင့်အပူချိန်နှစ်ခုလုံး။
AEMET ၏ခန့်မှန်းချက်အရကျွန်းဆွယ်၏မြောက်ပိုင်းတစ်ဝက်တွင်ပုံမှန်ထက် ပို၍ မိုးရွာနိုင်ပြီးကျန်နိုင်ငံများတွင်မူပုံမှန်ကန့်သတ်ချက်များအတွင်းဆက်လက်တည်ရှိမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ တနည်းအားဖြင့်သင့်ဒေသ၌များသောအားဖြင့်မိုးမရွာပါကယခုနှစ်တွင်ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုမရှိပါ။ ဟုတ်တယ်
ယခုပင်လျှင်ဇန်နဝါရီလ 11, 2016 တွင်ကျွန်တော်တစ် ဦး အကြောင်းပြောနေတာခဲ့ကြသည် မြောက်ဘက်ကိုဖြတ်ပြီးဖျက်ဆီးနေသောပြင်းထန်သောမုန်တိုင်းအထူးသဖြင့် Pontevedra, Lugo နှင့် A Coruñaတို့တွင်ဖြစ်သည်။ ရက်ပေါင်းများစွာရွာသွန်းမှုကြောင့်လမ်းများရေလွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်မြေပြိုခြင်းများ၊ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့ခြင်းများနှင့်မြစ်များလျှံကျခြင်းကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါ။ ယခုလတွင်ပျမ်းမျှမိုးရေချိန်ဖြစ်သည် 90mmပုံမှန် (၆၃ မီလီမီတာ) ထက် ၄၁% ပိုများသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလမှာနောက်ထပ်မုန်တိုင်းကျတယ်အမြင့် ၁၁.၉၅ ကီလိုမီတာအထိရှိသည့်လှိုင်းများနှင့်ပြင်းထန်သောလေပြင်းများရှိသည့်အပြင်မြောက်ဘက်တွင်တစ်နာရီ ၁၇၀ ကီလိုမီတာအထိမြင့်တက်သည်။ ဤအချိန်တွင်ထိခိုက်နစ်နာမှုအများဆုံးဒေသများမှာဂါလီစီယာအပြင် San Sebastiánဖြစ်သည်။ သို့သော်မြောက်ဘက်တွင်မိုးသည်းထန်စွာရွာခဲ့သည်။ ဤလသည်ပျမ်းမျှမိုးရေချိန်နှင့်အတူယေဘုယျအားဖြင့်စိုစွတ်သောဖြစ်ခဲ့သည် 88mm (ပုံမှန်တန်ဖိုးထက် ၆၆% ပိုများသည်၊ ၅၃ မီလီမီတာ) ။
မတ်လအတွက် မိုးရေချိန်ပုံမှန်တန်ဖိုးများမှာရှိနေဆဲဖြစ်သည်, ကျွန်းဆွယ်အရှေ့တောင် quadrant နှင့်အနိမ့်သော Balearic ကျွန်းများမှလွဲ။ ။
မျှော်မှန်းထားသည်ထက် ပို၍ မိုးရွာမည့် AEMET ၏အဆိုအရသာမိုမီတာရှိမာကျူရီသည်ပုံမှန်တန်ဖိုးများဖြင့်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အစား ကျန်ရပ်ရွာလူထုများအနေဖြင့်၎င်းတို့သည်ပုံမှန်ထက်ပူနွေးသောဆောင်းရာသီတွင် ၅၅% ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ မှန်ပါတယ်
အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ဟုတ်ကဲ့။ ဇန်နဝါရီလ ပျမ်းမျှအပူချိန်9.5ºCဖြစ်ခဲ့သည် (၂.၃ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်ပိုသည်။ ၁၉၈၁-၂၀၁၀ ကိုရည်ညွှန်းကာလအဖြစ်ယူသည်) သို့ဖြစ်ရာ ၁၉၆၁ ခုနှစ်မှစ၍ အနွေးဆုံးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကျွန်းဆွယ်၏အရှေ့မြောက်ဘက်တစ်ဝက်နှင့်တောင်ပိုင်းအချို့ဒေသများတွင်အပူကွဲမှုမှာအတော်အတန်နိမ့်သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ကျွန်းဆွယ်၏အရှေ့ပိုင်းတစ်ဝက်၊ ဘာလာရီရစ်ကျွန်းများနှင့်ကရာရီကျွန်းစုအချို့သောနေရာများတွင်အပူချိန်အကြားရှိသည်။ 0,5 နှင့်2,5ºCပိုမိုမြင့်မား (ရည်ညွှန်းကာလ: 1981-2010) ။ စပိန်၏ကျန်နိုင်ငံများတွင်မူတန်ဖိုးများသည်ပုံမှန်သို့မဟုတ်အနည်းငယ်နိမ့်သည်။ အထူးသဖြင့် Cantabrian တောင်တန်းများ၊ Sierra Morena၊ Sistema Central နှင့် Sistema Bélticoတို့တွင်ဖြစ်သည်။ အများဆုံးအပူချိန်မှာ ၀.၂ºC ပိုမိုမြင့်မားပြီးအနိမ့်ဆုံးအပူချိန်မှာ0,2ºCထက်ပိုမိုမြင့်မားပါသည် အဆိုပါ diurnal အပူလှိုနိမ့်ခဲ့သည် ဒါကြောင့်ဖြစ်သင့်သောအရာကိုရန်။
မတ်လမှာတော့ အပူချိန်ပုံမှန်တန်ဖိုးများကိုကျော်လွန်ဆက်လက်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံ၏အရှေ့ပိုင်းတစ်ဝက်တွင် Balearic ကျွန်းစုများ၊ အနောက်တောင်ဘက်ပိုင်းနှင့်ကနေဒါကျွန်းများအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ အနောက်မြောက်မျက်နှာပြင်တွင်အဓိကပြောင်းလဲမှုမရှိပါ။
ဆောင်းရာသီ 2018 ဘယ်လိုဖြစ်လိမ့်မည်နည်း နောက်တစ်ခုလား။
ယနေ့ (ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက် ၂၀၁၇) သည်လာမည့်ဆောင်းတွင်းမည်သို့ဖြစ်မည်ကိုသိရန်စောလွန်းသေးသည်။ အများအားဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လွန်ခဲ့သောအရာနှင့်တူသည်သို့မဟုတ်အလွန်ဆင်တူသည်ပျှမ်းမျှအပူချိန် ၈ မှ ၉ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသော်လည်းရက်များပိုမိုနီးကပ်လာသည်နှင့်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုပုံစံများထွက်မလာမချင်းအနည်းငယ်သေချာပေါက်သိရှိရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။
ခန့်မှန်းချက်အရ ၂၀၁၆ သည်သမိုင်းတွင်အနွေးဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်၊ ၂၀၁၅ ထက်ကျော်လွန်မည်ဟုမှတ်ယူထားပါ အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်သည်သာမိုမီတာတွင်မာကျူရီကိုဆက်လက်မြင့်တက်စေရန်ကူညီလိမ့်မည်, ပျမ်းမျှအပူချိန်ရောက်ရှိဖွယ်ရှိသည် 1,14ºC။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဆောင်းတွင်းဖြစ်လိမ့်မည် ပူနွေးခြောက်သွေ့လာပြီအထူးသဖြင့်မြေထဲပင်လယ်ဒေသ။
သို့သော်အယ်နီညိုသည် ၈ လမှ ၁၀ လအကြားတွင်တက်ကြွစွာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်စတင်သတိပြုမိပါက ၂၀၁၆ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြားနေအဆင့်သို့ရောက်လိမ့်မည်။ သို့သော်ဤသည်ကတည်းကစံချိန်အပူချိန်မျှော်လင့်ထားကြသည်မဟုတ်ကြောင်းမဆိုလိုပါ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုသည်မရပ်တန့်နိုင်သည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်လေထုထဲသို့လေထုညစ်ညမ်းစေသောဓာတ်ငွေ့များထုတ်လွှတ်မှုကိုလျှော့ချရန်အမှန်တကယ်ထိရောက်သောဆောင်ရွက်မှုများမပြုလုပ်ပါကလူသားများသည်တစ်နေ့မှတစ်ရက်သို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုညစ်ညမ်းစေခြင်းကိုမရပ်တန့်နိုင်ပါ။ ဒါတောင်မှ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်နှစ်ပေါင်း ၁၀,၀၀၀ လိုအပ်နေ ဦး မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ခန့်မှန်းချက် » ဆောင်းရာသီဘယ်လိုဖြစ်မလဲ
76 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
Omar Sanchez ကိုစာပြန်ပါ
လယ်သမားများသည်ဥယျာဉ်မှူးဝါသနာရှင်များကဲ့သို့ပင်သူတို့ကြီးထွားနိုင်သည့်အရာကိုသိရန်မိမိတို့ဒေသရှိရာသီဥတုကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ ဒီကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုနှင့်အတူ, ဒီပို။ ပို။ ခန့်မှန်းရခက်တစ်ခုခုပါပဲ။
Monica Sanchez ကိုပြန်ကြားပါ
eduard lopez အားပြန်ကြားပါ
အဲဒီအစားဆန့်ကျင်ဘက်, သူတို့လျော့နည်းသွားနိုင်ပါတယ်။ စင်စစ်အားဖြင့်မြေထဲပင်လယ်ဒေသတွင်ဥပမာအားဖြင့်၎င်းတို့သည် ၂၇% လျော့နည်းသွားပြီးဆက်လက်ကျဆင်းမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်မိုးရွာသွန်းမှုပုံစံမည်သို့ပြောင်းလဲသွားမည်ကို Nature ဂျာနယ်တွင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Is ဤ.
မော်နီကာ၊ ဤဆောင်းပါးများကိုသင်၏ဆောင်းပါးမှယူခဲ့သည် -“ ... ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုသည်ပတ် ၀ န်းကျင်သို့ညစ်ညမ်းနေသောဓာတ်ငွေ့များထုတ်လွှတ်မှုကိုလျှော့ချရန်အမှန်တကယ်ထိရောက်သောအစီအမံများမပြုလုပ်ပါက၊ တစ်နေ့မှတစ်ရက်သို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုညစ်ညမ်းစေခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်။ ထိုမျှနှင့်ပင်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀၀ ကြာမြင့် ဦး မည်ဖြစ်သည်။ »။
ခင်ဗျားပြောတာကကမ္ဘာကြီးရဲ့အဆုံးကနီးနေပြီ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့မျက်စိကန်းမှုကညစ်ညမ်းတဲ့ဓာတ်ငွေ့တွေကိုထုတ်လွှတ်တာကိုရပ်တန့်မသွားစေတဲ့အပြင်ကမ္ဘာကြီးရဲ့ပျမ်းမျှအပူချိန်တိုးလာပြီးငါတို့စာသားကြော်မကုန်ခင်အထိတိုးလာလိမ့်မယ်။ သမုဒ္ဒရာများပျောက်ကွယ်သွားပြီးကုန်းမြေပေါ်တွင်နေထိုင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထပ်မံ၍ ပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်လူသားများသည်လေထုအတွင်းသို့ညစ်ညမ်းနေသောဓာတ်ငွေ့များထုတ်လွှတ်ခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်သည်ဆိုပါကနှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀၀ ကြာမည်ဟုသင်ယူဆပါသည်။
ဟုတ်တယ်၊ အေးတယ်။ ငါတို့တွေ့လိမ့်မယ်
သင်တို့ရှိသမျှသည်ရောင်းခြင်းနှင့်မုသာကိုသုံးသောသူဖြစ်ကြ၏။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုအကြောင်းအရင်းများစွာရှိသော်လည်း cheamtrails နှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမျှမပြောထား။ လူတွေကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရအောင်လုပ်ပြီးမင်းရဲ့အစိုးရတွေကိုရှုတ်ချဖို့ဘယ်တော့မှတားဆီးမှာမဟုတ်ဘူး။
THE Brown ဟုသူကပြောသည်
ဤသည်မှာနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘဲမိုးလေ ၀ သဗေဒ၏ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီဆောင်းရာသီကအရမ်းအေးမယ်၊ ဘာမှမဖြစ်ဘူး၊ ငါတို့မှာအရမ်းပေါ့ပါးတဲ့အနည်းငယ်ရှိလို့ငါအရမ်းအံ့သြသွားတယ်၊ နောက်ဆုံးတော့အပူပိုင်းမြေထဲပင်လယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
မင်္ဂလာပါ MTT ။
ရာသီဥတုကိုမပြုပြင်ပါနှင့် ပို၍ မိုးရွာသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်
ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါတို့မညစ်ညမ်းစေဘူးဆိုရင်ရာသီဥတုကအရမ်းကွဲပြားလိမ့်မယ်။ လူးဝစ်ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။
နွေရာသီကုန်တော့မယ်မဟုပ်လား? ဟဲဟဲ မျှော်လင့်ပါတယ်၊
၂၀၁၆ သမိုင်းမှာအပူဆုံးနွေရာသီဖြစ်မလား။ ကောင်းပြီ၊ မဖြစ်နိူင်ဘူး၊ ၂၀၁၅ မှာ Murcia မှာငါတို့ကင်ခဲ့ကြပေမယ့်ဒီနှစ်မနှစ်ကတောင်မနီးစပ်ဘူး၊ အပူချိန်မြင့်မားတဲ့အားလပ်ချိန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်နွေရာသီမှာငါတို့သုံးလေ့ရှိတဲ့အရာတွေအတွက်ငါတောင်မှမသိသေးဘူး။ မင်းသတိထားမိလား
အချက်များစွာတွင်၎င်းသည်ယခင်ကထက် ပို၍ အေးခဲသည်၊ မှန်သည်။ ငါနေတဲ့နေရာ (Mallorca)၊ နွေရာသီဟာအေးအေးဆေးဆေးပဲ။ ညနေခင်းမှာပရိတ်သတ်မပါပဲ။ သို့သော်ကမ္ဘာဂြိုလ်၏အပူချိန်မှာဆက်လက်မြင့်တက်နေသည်။
Miquel Vidal Barceló ဟုသူကပြောသည်
မင်လာရီကနေမွန်နီကာ, သင်လုံးဝမှန်ပါတယ်၊ နွေရာသီဟာပျော့ပျောင်းပေမယ့်သစ်ပင်များသည်ရေငတ်နေကြသည်။
Miquel Vidal Barcelóအားစာပြန်ပါ
မှန်လျှင်။ လုံးဝနီးပါးဘာမျှမမိုးရွာခဲ့, နှင့်လဲကြသေးသောပေါက်အနည်းငယ်လျင်မြန်စွာအငွေ့ပျံခဲ့သည်။ ယခုဆောင်း ဦး ရာသီတွင်မိုးရွာမည်ဟုမျှော်လင့်ကြပါစို့။
Jose Antonio ဟုသူကပြောသည်
jose antonio အားပြန်ပြောပါ
ဒီနှစ်မက်ဒရစ်မှာဆီးနှင်းပိုမိုအခွင့်အလမ်းများရှိပါသလား (ငါ SNOW မျှော်လင့်ပါတယ်), ငါကပြောပါအဖြစ်ကအေးနိုင်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ SNOW hahahahaha မျှော်လင့်ပါတယ်
ဒီဆောင်းရာသီရှိ Dallas Tx တွင်မည်ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း
၃-၄ လအတွင်းမည်သည့်အချိန်တွင်လုပ်မည်ကိုသေချာစွာမသိနိုင်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် La Niñaဖြစ်စဉ်ကိုဖွင့်ပါကမြောက်အမေရိကသည်အေးလိမ့်မည်။ တကယ်တော့နယူးယောက်လိုမြို့ကြီးတွေမှာနှင်းကျရင်သိသိသာသာများတယ်။
စပိန်နိုင်ငံတွင်၎င်းကိုသက်ဝင်စေလျှင်၎င်းဖြစ်ရပ်သည်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိမည်ကိုမသိပါ။ သို့သော်ပုံမှန်အရာ (သို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သောအရာ) သည်ပူနွေးသောဆောင်းရာသီပြီးလျှင်အအေးသို့မဟုတ်အလွန်အေးသောအချိန်ဖြစ်သည်၊ အထူးသဖြင့်နွေရာသီအပူချိန်သည်ယခုနှစ်ဖြစ်ခဲ့သည့်အတိုင်းယခုထက်နည်းသောပုံမှန်တန်ဖိုးများသို့ရောက်ရှိနေပြီဆိုလျှင်ဖြစ်သည်။
စန်ဒရာ Naharro Gomez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါအလွန်ကောင်းပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်စန္ဒြာဘယ်လိုနေလဲ၊ ဘာစီလိုနာမှာနေထိုင်တဲ့ဆောင်းရာသီကိုငါအရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်၊ လတ်ဆတ်နေမလားသိချင်တယ်လား။ ဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်အားဖြင့်မိုးရွာတာများနေတဲ့အချိန်မှာအနည်းဆုံးပုံမှန်ထက်နှင်းကျရင်တောင်မှရာသီဥတုအရမ်းခက်တဲ့အတွက်သင်မရနိုင်ရင်စိတ်မပူပါနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါ။
Sandra Naharro Gómezအားပြန်ပြောပါ
ကျနော်တို့ La Niñaဖြစ်ရပ် activated ဟုတ်မဟုတ်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်စပိန်၌ငါတို့သတိထားမိသို့မဟုတ်မရှိမရှိကြည့်ရှုရန်ရှိသည်။
အခြေခံအားဖြင့်တော့ငါကပုံမှန်အားဖြင့်ပိုပြီးနှင်းများကျတဲ့ဟာကျွန်းဆွယ်အရှေ့ဘက်နဲ့ Balearic ကျွန်းများမှာဖြစ်တယ်။ လေသည်ပြင်းထန်သောလေဖြစ်သည် (ဥပမာဆိုက်ဘေးရီးယား) မှမြေထဲပင်လယ်၌အအေးဟုခေါ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာအပူချိန်-4ºCထက်လျော့နည်းသောမှတ်တမ်းများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ဖြစ်သည်။
ကြည့်ပါ၊ ဒီဆောင်းရာသီဟာအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီမှာတောင်နွေးခဲ့ပေမဲ့အေးခဲတဲ့လေထုတွေရောက်လာပြီးပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှာနှင်းတွေကျခဲ့ပေမယ့် ၂၀၁၅ လောက်တော့ငါအာရေဂွန်မြို့မှာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ကနေ ၁၅၀ မီတာအကွာမှာနေထိုင်ပြီးငါ့မှာရှိတယ်။ ငါ့အသက် ၁၆ နှစ်မှာဆီးနှင်းများထူထပ်လာတယ် ..
သူတို့ကကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုအကြောင်းအများကြီးပြောကြပေမယ့်ငါတို့ကရေခဲခေတ်တုန်းကရှိတယ်လို့မပြောကြဘူး။ ဆောင်းရာသီသည်အထူးသဖြင့်မြောက်အမေရိက၊ ဥရောပနှင့်အာရှတို့တွင်အေး။ အေးသည်။
မင်းမသိဘူး ... မင်းကကြောက်နေတယ်
ဒီဆောင်း ဦး ရာသီမှာမိုးရွာသွန်းမှုများစွာရှိမလားသိချင်တယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
မူအားဖြင့်မှန်သည်ဟုပြောလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းသင်သေချာမသိပါ သင်နေထိုင်သောနိုင်ငံ၏မည်သည့်အပိုင်း၊ အမြင့်၊ လေနှင့်စသည်တို့ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ကျနော်တို့ inform အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Murcia ပြည်နယ်ရှိ Torre Pacheco မှဖြစ်ပြီးပုံမှန်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမည်လားဆိုသည်ကိုသိလိုပါသည်။ အကယ်၍ ပျမ်းမျှအပူချိန်ထက်နိမ့်ကျသည့်ဆောင်းရာသီပတ်ဝန်းကျင်တွင်မှတ်တမ်းတင်မည်ဆိုပါက။ ထိုအခါငါဒီကျဆုံးလျှင် DANA ကြောက်မက်ဘွယ်သောအအေးစက်၏အသွင်အပြင်၏ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားသည်, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုလည်းသိလိုခဲ့သည်။
အနောက်တောင်ဘက်ကျွန်းဆွယ်အတွက်ဘာဆောင်း ဦး ရာသီခန့်မှန်းချက်ရှိပါသလဲ Huelva Seville Cadiz နှင့် Badajoz
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဟာမိုးခေါင်ခြင်းနှင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းပြscနာကိုကြောက်ပြီး ၀ မ်းနည်းမိပါတယ်၊ Sierra de Huelva၊ Aroche မြို့မှဖြစ်ပြီးကျွန်တော်လာမယ့်ဆောင်း ဦး ရာသီမှာမိုးရွာသွန်းမှုရှိမယ်၊ ပုံမှန်ဆောင်းရာသီဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့စတင်ချင်ပါပြီ။ ဒီလှပသော Huelva မြို့ကနေနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ Sierra Nevada မှာဘယ်ဆောင်းရာသီမျှော်လင့်ထားပါသနည်း၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်ပူနွေးခဲ့သည်။ ===========
ကောင်းပြီ၊ ဒီဆောင်းရာသီဟာ Navarre မှာဘယ်လိုနေမလဲ။ အရင်မိုးရွာတာထက်မိုးရွာမလား? မျှော်လင့်ကကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်
မင်္ဂလာပါ။ ငါဗင်စီနီးယားမှာရှိတဲ့ဆာဂွန်တိုမြို့မှာနေတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်များ၏အပူချိန်နှင့်ချီချီနာဘို၏ဆောင်း ဦး ဆောင်းရာသီအလွန်ပင်ပန်းသည်။ အအေးမဟုတ်သလိုမိုးလည်းမရွာဘူး။ အများဆုံးမှာအရိုးကိုထိုးဖောက်သောအပူထိန်းစိုထိုင်းဆ။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုပူးပေါင်းကြံစည်သူတွေထဲကနေထည့်ပေးလိုက်တာ၊ ငါအရမ်းဂုဏ်ယူတယ်။ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းနေသည့်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မိုးရေပြတ်သွားသောဓာတုဗေဒလမ်းကြောင်းများကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မျက်လုံးနှင့်ကြည့်မိသည်။
Miguel အိန်ဂျယ်Sánchez lamuela ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် Aragon မြို့မှအထူးသဖြင့် Almonacid de la Sierra မှဖြစ်ပြီး၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုထက်ပိုပြီးစိတ်ပူမိပါတယ်။ မိုးရွာသွန်းမှုနည်းပါးခြင်း၊ ယခုနှစ်တွင်အကြီးအကျယ်မိုးခေါင်ခြင်း၊ စမ်းရေများခန်းခြောက်ခြင်း၊ ကျွန်တော်ကလေးဘဝတုန်းကမိုးထက်အများကြီးပိုရွာပြီးအခုထက်ပိုပြီးနှင်းကျတယ်ဆိုတာကလေးဘဝတုန်းကမှတ်မိသေးတယ်။ ကျွန်တော်မသိဘူးကငယ်ငယ်ကရာသီဥတုဟာအုပ်ချုပ်မှုဒါမှမဟုတ်ခြွင်းချက်ဖြစ်ခဲ့ရင်။ ငါမိုးလေ ၀ သခန့်မှန်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမမေးတော့ပါဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမိုးလေ ၀ သဌာနကိုရေရှည်ခန့်မှန်းတဲ့အခါမှာရှုပ်ထွေးသလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတာကိုကျွန်တော်နှစ်သက်တယ်။ တင်းမိုးရွာသွန်းသည်။ ငါကမင်္ဂလာပါမိုains်းရွာစေခြင်းငှါငါချစ်ကြတယ်။
Miguel Angel Sánchez lamuela အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ နို ၀ င်ဘာလမှာပြင်သစ်၊ Camino de Santiago ကိုသွားတော့မယ်။ နို ၀ င်ဘာလမှာစပိန်မြောက်ဘက်မှာဘယ်အချိန်ရှိသလဲဆိုတာသိနိုင်လား။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကီလိုမီတာ ၂၀ ခန့် Valencia ရှိမြို့မှဖြစ်သည်။ ကမ်းခြေမှ… ..and မုန်တိုင်းမိုးရွာသွန်းမှုသို့မဟုတ်ရှောင်ရှားခြင်းမှဖျက်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်တားဆီးခြင်းအကြောင်းကျွန်ုပ်ကြားခဲ့လျှင်။ ငါဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိမှန်နေတယ်ဆိုတာငါမသိဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘာလုပ်သလဲဆိုတာကိုမသိဘဲ .... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
francisco Javier perez armas ဟုသူကပြောသည်
francisco javier perez armas အားပြန်ကြားပါ
၎င်းသည်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာထက် ပို၍ အေးနိုင်သည်။ အကယ်၍ La Niñaဘောလုံးကန်လျှင်မိုးရွာနိုင်သည်။ သင်တို့မူကားသေချာမသိနိုင်ပါ။
ဆာဗေးဒေါ Segui ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာနံနက်ခင်း၊ ဗလင်စီယာတွင်ယခုဆောင်းရာသီတွင် ၃ ဒီဂရီ ၄ ဒီဂရီရှိလျှင်၎င်းသည် Citrus ကိုအေးခဲအောင်လုပ်သလား။
Salvador Segui ကိုပြန်ပြောပါ
သေချာမသိဘူး ငါပြောနိုင်တာကဘယ် citrus အသီး၊ လိမ္မော်၊ သံပုရာတို့အပေါ်မှာမူတည်ပြီး ၄ င်းတို့သည်အအေးဓာတ်များကို-4ºCအထိခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
suaoker gaizto ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
ပြီးခဲ့သည့်ဆောင်းရာသီအကုန်ပိုင်းတွင် tve1 မှမိုးလေဝသဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများတွင်မှတ်ချက်ပေးသည်ကိုသူတို့အနေဖြင့်မည်သည့်မော်ဒယ်များကိုမောင်းနှင်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါကလာမည့်ဆောင်းရာသီသည်ယခင်လာမည့်ဆောင်းရာသီထက်ကျော်လွန်မည်ဟုဆိုသည်။ သို့မဟုတ်ပင်ပိုပူလာတယ် ......... ငါသူတို့မှားဖြစ်ကြောင်းမျှော်လင့်ပါတယ်
suaoker gaizto သို့ပြန်သွားရန်
မင်္ဂလာပါ Mrs .: Mónica sanchez၊ ဒီနှစ်မှာ Lagunera ဒေသကိုဘယ်သူ့အတွက်နှင်းကျလိမ့်မလဲလို့မေးချင်ပါတယ်။
ဟယ်လို! မစ္စတာမော်နီကာ၊ လူများစွာသည်ရာသီဥတုကိုစိတ်ဝင်စားကြသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်တီဂျူနာဘေကာလီဖိုးနီးယားမြောက်ပိုင်းတွင်နေထိုင်ရန်စိတ် ၀ င်စားပါသည်။ အပူနှင့်အနည်းငယ်မျှသာရွာသွန်းသောကြောင့်နှစ်အနည်းငယ်မျှမိုးရွာသွန်းမှုနည်းပါးပြီးယခုနွေရာသီတွင်ပိုမိုမြင့်တက်ခဲ့သည်။ ပုံမှန်အပူချိန်။ ရေလိုလို့မိုးရွာမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ လေးစားပါတယ်
မင်နီကာ၊ ကျွန်ုပ်၏အလေးအနက်မေးခွန်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏နွေရာသီတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပီရူးကုန်းမြင့်ဒေသ၌မိုးရွာမည်၊ မဖြစ်မည်နည်း။
မင်္ဂလာပါ၊ ကာဇစ်စ်ပြည်နယ်မှာဆောင်း ဦး ရာသီဆောင်းရာသီကိုဘယ်လိုပြသလဲ။
ကောင်းသောညပါ။ ဘာစီလိုနာတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများပါ ၀ င်ပြီးမုန်တိုင်းကြောင့်အနည်းဆုံး ၅ နာရီကြာတည်ငြိမ်နေပြီး၊ အမှန်တရားမှာစက်တင်ဘာလအလွန်ပူပြင်း။ ခြောက်သွေ့သောစက်တင်ဘာလနောက်ပိုင်းတွင်ယေဘုယျအားဖြင့်နွေရာသီအလွန်ပူပြင်းခြင်းမရှိသော်လည်းအပူချိန်မှတ်တမ်းများနှင့်အတူတန်ဖိုးထားခံရသည်။
ရှင်းနေသည်မှာရာသီဥတုအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ လူသိများလာသည်နှင့်အမျှယခုအဆက်မပြတ်သတင်းအချက်အလက်အပြင်ဝဘ်ပေါ်တွင်ရှိသည့်အကန့်အသတ်မဲ့ကိရိယာများနှင့်လည်းပိုမိုသိရှိလာသည်ကိုထင်ရှားစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရာသီဥတုမော်ဒယ်များကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်မှုများကိုအမြဲတမ်းမမြင်တွေ့ရပါ။ ၉ လအကြာခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုမှတ်သားနိုင်သောရာသီဥတုမော်ဒယ်များပင်လျှင် ၆ နာရီလျှင်တစ်ကြိမ်လေထုစနစ်တစ်ခုလုံး၏ဆင့်ကဲပြောင်းလဲတိုးတက်မှုနှင့်အတူ။
ဒါပေမယ့်ဒီအရာအားလုံးကဘာမှအာမခံချက်မရှိပါဘူး၊ တကယ်တော့ဒါဟာငါတို့ဂြိုလ်ပေါ်ရှိရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၊ ငါတို့ပရိုဂရမ်ပြုထားသည့်စူပါကွန်ပျူတာများအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်သို့မဟုတ်ခန့်မှန်းရန်သာကူညီသည်။ သို့သော်ကမ္ဘာပေါ်ရှိရာသီဥတုသည်အချိန်တိုအတွင်းကောက်ယူသောအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ကိန်းဂဏန်းခန့်မှန်းချက်များထက်များစွာရှိသည်။ သို့သော်ကမ္ဘာမြေသည်နှစ်ပေါင်း ၄၅၀၀ သန်းပေါင်းများစွာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်နေသည်။
အလွန်စစ်မှန်တဲ့။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည်ဖြစ်ရပ်အသစ်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည်မှန်ကန်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏သမိုင်းတွင်လူ့အချက်ကိုရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၌တစ်ခါမျှမပါဝင်ခဲ့ဖူးပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာရာသီဥတုကိုရာစုနှစ်တစ်ခုကျော်လွှမ်းမိုးထားပြီးမကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များအတွင်းအရှိန်မြှင့်လာခဲ့သည်။
ဤကဲ့သို့သောသဘာဝအချက်များနှင့်ကလေး - မိန်းကလေးအကြောင်းအချက်များ (သို့) ဆိုလာသံသရာများနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အနီးကပ်ရာသီဥတု၏အနာဂတ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ မရနိုင်ပါ။
ရေခဲခေတ်မှသဲကန္တာရသို့သွားသောအစွန်းတစ်ဘက်မှတစ်ဘက်သို့သီအိုရီအမြောက်အများဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည်။ သို့သော်ရှင်းနေသည်မှာလူ့အချက်သည်အမြဲတမ်းအနုတ်လက္ခဏာဖြစ်နေသည်၊ Planet ကိုယ်တိုင် (ကျွန်ုပ်တို့တွင်တစ်ခုတည်းသောလေထု)၊ လေထု၊ သမုဒ္ဒရာများနှင့်ကမ္ဘာမြေကြီး၏ညစ်ညမ်းမှုသည်အရာရာတိုင်းကိုညစ်ညမ်းစေနိုင်သည်။
ငါတို့ဟာဘေးဥပဒ်တွေ၊ အသိဉာဏ်အရှိဆုံး၊ များများစားစားမရှိဘူး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းကမရပ်တန့်နိုင်ဘူး၊ ငါတို့တွေများများပိုများလာတယ်၊ ပိုပိုပြီးများပြားလာတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်မကြီးထွားပါ၊ ခန့်မှန်းချက်များအရ ၂၀၅၀ တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သန်းပေါင်း ၁၂၅၀၀ လူသားဖြစ်မည်ဟုခန့်မှန်းကြသည်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၇၀၀၀ ကျော်သာရှိပြီး ၁၉၀၀ တွင်သန်း ၁၆၀၀ သာရှိတော့သည်။ လူ့ဘောင်သည်ပြိုလဲသွားလိမ့်မည်၊
ငါ Ultimatum ကမ္ဘာမြေမှအကြံပြုပါသည်။
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည်ဆီးနှင်းမုန်တိုင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်နွေရာသီတွင်အလွန်ပူပြင်းပြီးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလေ့လာသင်ယူနေသည်။ ဆောင်းရာသီတွင်အေးသောလှိုင်းများနှင့်အစွမ်းထက်သောကြောင့်စပိန်နိုင်ငံတွင်နှင်းကျခြင်းသည်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်တွင်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသော၊ ဆောင်းရာသီတွင်အပူချိန်နိမ့်ခြင်း၊ သင်မုန်တိုင်းများသိသည်။ စပိန်တွင်ဘာစီလိုနာရှိသူများကဲ့သို့လေထုထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာသည့်အခါလေအေးသည်လေထုထဲသို့ဝင်ရောက်သောအခါမတည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
La Niñaဖြစ်ရပ်ဆန်းသည် SW လေများကိုဖြစ်ပေါ်စေပါက Penisual Ibéricaတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Pyrenees ရှိမြင့်မားသောမြင့်မားသောနေရာတွင်ဆောင်းတွင်းအစားဆောင်းတွင်း၌မိုးရွာမည်လော။
မင်္ဂလာပါ၊ Ciudad Real ခရိုင်တွင်အပူချိန်ကျသွားပြီးမိုးပိုမိုရွာတော့မလားသိလိုသည်။ တောင်ကုန်းကို ဖြတ်၍ သစ်ပင်ခြောက်များကိုတွေ့ရခြင်းသည်ရှက်စရာ ဖြစ်၍ ယနေ့အချိန်တွင်များစွာလိုအပ်သည်။
မင်နီကာမင်း :) မေးခွန်းတစ်ခုကငါအပူနဲ့အလင်းကိုမတည့်ဘူး။ ငါ Valencia ရှိ Turis မှာနေပြီးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပိုပြီးခံနိုင်ရည်မရှိဘူး။ အရိုးများကွဲသွားပြီးအိမ်များကိုသံချေးများဖြင့်အဝေးသို့ထွက်သွားနိုင်သည့်စိုထိုင်းဆကိုသာသမုဒ္ဒရာနှင့်မနီးမဝေးတွင်တွေ့နိုင်သည်။
ငါနေမကောင်းဖြစ်တာကြောင့်ဓာတ်မတည့်သူကဒီဟာကိုတစ်နေ့လုံးနေရောင်ခြည်ရောက်နေပြီဆိုတာကိုအတည်ပြုလိုက်တယ်။ ဤတွင်နွေရာသီသည်နယူးယောက်ရှိ (၃၁) ရက်နေ့တွင်ပြီးဆုံးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရပ်ဆိုင်းထားသူများနှင့် (၂၇) ဒီဂရီတို့ဖြင့်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်တွင် (၂၀) ​​ဒီဂရီနှင့်တိုးပွားလာသည်။dထိုးနှက်ကျဆင်းသွားကြောင်းအနည်းငယ်ချောင်ရက်ပေါင်းမှလွဲ။ ။ ကျွန်တော့်မေးခွန်းက
ငါ Cantabrian ၏ခန့်မှန်းချက်ကိုကြည့်ပါသို့မဟုတ်ထိုဆောင်း ဦး ရာသီပင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည်မြေထဲပင်လယ်ဒေသအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမရှိနှင့်ကျန်တဲ့အရာများကိုဒီလောက်ကြီးပြီးမသက်ရောက်မှုရှိမရှိသိချင်ပါတယ်။ ငါတို့ဒီမှာအနောက်ဘက်နဲ့ရှိတယ်။ မနေ့က။ သို့သော်မည်သည့်ခန့်မှန်းချက်တွင်မျှမည်သူမျှထိုသို့မပြောပါ။ ဒါပုံမှန်လား? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာမိုးမရွာတော့ဘူးနွေရာသီနဲ့တစ်ဝက်လောက်မကုန်တော့ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့အာဖရိကလိုအဆုံးသတ်တော့မှာလား။ အပြောင်းအလဲကသူတို့ကိုသိပ်ပြီးမိုးရွာသွန်းမှုရှိရင်ဘာကိုမထိခိုက်စေတာလဲ။ ဗလင်စီယာသည်စပိန်ကယ်လီဖိုးနီးယားဖြစ်လာသည်။ Los Angeles ရှိ exo မှ Santa Clarita တွင် Valencia လို့ခေါ်တဲ့isရိယာတစ်ခုရှိတယ်။ သူတို့တောင်မှမသိသေးဘူးဆိုရင်မိုးမရွာဘူး။ အကယ်၍ aki သည်ဤမျှလောက်သက်ရောက်ပါကမြေထဲပင်လယ်ဒေသတွင်လူများအားသစ်ပင်များကိုအဘယ်ကြောင့်မစတင်စိုက်ပျိုးကြပါသနည်း။ အာဖရိက cokindante နှင့်မြောက်ဘက်သိသာထင်ရှားသည့်နေရာများတွင်သူတို့သည်အမြဲတမ်းလူနေထူထပ်စွာနေထိုင်ကြသည်။ မြို့သူမြို့သားများသည်၎င်းတို့၏အနည်းငယ်သောကောက်ပဲသီးနှံများကိုရေလောင်းကြသည်။ ထို့အပြင်သစ်ပင်များနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ပူပင်။ ရာသီဥတုမဆုံးရှုံးစေရန်ဖြစ်သည်။ ဂရုစိုက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မာရီယာ from မှကြိုဆိုနှုတ်ဆက်သည်
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်တစ်ခုလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ သို့သော်ဟုတ်ကဲ့၊ ၎င်းသည်အများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်သည့်ဒေသအချို့ရှိသည်။ တကယ်တော့ဒီဘလော့ဂ်တစ်ခုတည်းမှာပဲစပိန်ရဲ့ရာသီဥတုဟာမော်ရိုကိုရဲ့အခြေအနေနဲ့ပိုတူနိုင်တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုထားတယ်။
အချို့သည်အဘယ်ကြောင့်ကျဆုံးခြင်းနှင့်စတင်ပြီးအချို့သည်နွေရာသီတွင်ရှိနေသေးသနည်း ကောင်းပြီ၊ ရာသီဥတုသည်တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းဖြစ်ရန်၊ အချက်အလက်များစွာ ၀ င်ရောက်ရန်လိုအပ်သည်။ တည်နေရာ၊ ပထဝီအနေအထား၊ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်၊ ပင်လယ်အပူချိန်၊ လေ၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်းဆွယ်၏မြောက် (သို့) အနောက်မြောက်မှမုန်တိုင်း ၀ င်သောအခါမြေထဲပင်လယ်နှင့်အထူးသဖြင့်တောင်ဘက်သို့ရောက်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤအချက်များတွင်အီကွေတာနှင့် ပို၍ နီးကပ်သောကြောင့်နေ၏ရောင်ခြည်များသည် ပို၍ တိုက်ရိုက်ဖြစ်သောကြောင့်ပင်လယ် မြေထဲပင်လယ်သည်ဥပမာ၊ ဂါလီစီယန်ပင်လယ်ထက်အမြဲပူနွေးသည်။
သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးမေးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကောင်းပြီငါဘာပြောရမှန်းမသိဘူး မြို့ရွာအားလုံး၌သစ်ပင်များကိုစိုက်ပြီးသစ်တောပြုန်းတီးမှုများစွာမဖြစ်စေလိုပါ။ အခြေအနေတွေကပိုကောင်းလိမ့်မယ်။
Px ဥက္ကာဗေဒပညာရှင်များသည်တစ်နှစ်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့မှနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်စိတ်ဖိစီးမှုခံစားခဲ့ရသောကျွန်ုပ်တို့မှငွေများကို iodide ၏ပျံ့နှံ့မှုမှတဆင့်မိုးရွာခြင်းကိုဖယ်ရှားရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့ကြသောအဆက်မပြတ်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှုတ်ချရန်မဝံ့ဝံ့ကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးပိုင်ဆိုင်သောရေမရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုဆိုးရွားလာပြီးပိုမိုဆိုးရွားလာသည်
Antigono Carjedonio ဟုသူကပြောသည်
မှန်ပါသည်၊ ရာသီဥတုသည်ပြောင်းလဲနေပြီး၎င်းသည်အမြဲတမ်းပြုမူခဲ့သည်၊ လူသည်၎င်းကိုလွှမ်းမိုးသည်မှာရှင်းပါသည်။ ယခုရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၏ ၁၀၀% သည်မနုropဗေဒဖြစ်ပြီး၊ ထုတ်လွှတ်မှုများကိုလျှော့ချခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြောင်းလဲမှုများကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက်အလွန်ထူးကဲသည်။ ရာသီဥတုကိုအဓိကတာဝန်ယူရတဲ့အချိန်ကနေဖြစ်တယ်။ ဓာတ်ငွေ့များထုတ်လွှတ်ရန်နည်းနည်းဘာရှိလဲ။ ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ? ဟုတ်တယ် အရာတွေအများကြီးပြောင်းလဲပစ်? သိသာတဲ့။ ဒါပေမယ့်ငါတို့မှာရာသီဥတုကိုကိုင်တွယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး၊ ဒါဆိုရင်ငါအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူး။
စကားမစပ် CO2 သည်လေထုညစ်ညမ်းစေသောဓာတ်ငွေ့မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်အပင်၏အာဟာရဖြစ်သောအသက်ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရာသီဥတုသက်ရောက်မှုရှိခြင်းသည်အခြားအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Antígono Carjedonio အားပြန်ကြားပါ
CO2 သည်ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပြီး Nox, Co ကဲ့သို့သောညစ်ညမ်းသောဓာတ်ငွေ့မဟုတ်ပါ။
ဒီနှစ် Soria မှာဆီးနှင်းကျလိမ့်မည်နည်း
မင်းတို့ရဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့မင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအတွက် Monica ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဂြိုဟ်ကိုတင်ဆောင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကြဲလိုက်တဲ့အရာတွေကိုရိတ်သိမ်းနေပါပြီ။ ကျွန်မတစ်ယောက်တည်းနေတယ်။ အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီ၊ ကြောင်တွေအိမ်တစ်အိမ်မှာမီးဖိုတစ်လုံးနဲ့အတူတစ်ယောက်တည်းနေတယ်။ မီးဖိုကိုထွန်းပါ။ ဒီနှစ်မှာနွေရာသီအတွက်အဆင်တန်ဆာတစ်ခုအဖြစ်ထည့်ထားတဲ့ပန်းအိုးတစ်ခုနဲ့အတူရှိနေမှာပါ။ ငါ့ကြောင်တွေကမိုးလေ ၀ သပညာရှင်တွေပါ။ သူတို့ဟာဆောင်းရာသီအတွက်အဆင်သင့်ပြင်နေကြတယ်၊ တောင်ပေါ်ကနှုတ်ခွန်းဆက်စကား။
မင်္ဂလာပါ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထက်ဆောင်းရာသီပိုပိုရမယ်
၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာဘယ်လောက်အေးမယ်၊ ငါတို့ရှိနေတာလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ဆောင်းရာသီဘယ်တော့စမလဲ။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအအေးမိခြင်းကိုကျွန်တော်ချစ်မြတ်နိုးရသည့်ပြည်နယ်မြေ၏ညစ်ညမ်းသောဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့်ညစ်ညမ်းစေသူ ...
ဒါဟာအတူတူပင်မဟုတ်ပါ: ရှိသည်ဖို့, နိုင်မှရှိသည်နိုင်မှရှိသည်။
အကယ်၍ ၎င်းသည်အပြာရောင်ဖြစ်ပါကတိမ်များပေါ်လာပါကသင်သည်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ လေပြင်းတိုက်ခြင်းများသည်ကောင်းကင်ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်ဆိုပါက၊ လေယာဉ်စီးလာသည်နှင့်အမျှပျောက်ကွယ်သွားသောစီးပွားဖြစ်လေယာဉ်များ၏ကျန်ရှိနေသေးသောသေးငယ်သည့်အသေးအဖွဲများကိုကျွန်ုပ်ဆိုလိုနေခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ပါးလွှာသောမိုcloud်းတိမ်သည် ,,,,, မိုto်းရွာစေခြင်းငှါနှုတ်ဆက်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်မိုclouds်းတိမ်များရှိပြီးမိုးရွာတော့မည့်အကြောင်းကိုသင်တွေ့မြင်ပါကထိုလမ်းကြောင်းများကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်သည်။ သင်ပြောပြလိမ့်မည်ဟုငါသိသောကြောင့်ငွေ့ရည်ဖွဲ့ကျလိမ့်မည်၊ ထိုရေတိမ်များပျောက်ကွယ်သွားမည်မှာသေချာသည်။ နောက်တဖန်မိုးမရွာဘဲ
စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်မှာဤအလေ့အကျင့်ကိုပိုမိုမြင်သာသည်။ Castilla la Mancha သည်စပျစ်သီးများစိုက်ပျိုးခြင်းကိုငါပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်သောငါvinalopóတွင်ခံစားခဲ့ရပြီးတောင်သူများ၊ ranchers နှင့် Murcia၊ Alicante၊ အလေ့အကျင့်များ။
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆိုသော်ကမ္ဘာမြေကြီးသည်အောက်စီဂျင် ၁၀၀% နီးပါး (များစွာသောသက်ရှိအားလုံးကိုသေစေနိုင်သော) ပျော်မွေ့နိုင်သည့်အချိန်ရှိခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင်ကမ္ဘာမြေ၏အပူချိန်အလွန်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး မီးကြီး ဘာမှနောက်မှကြီးပွားသတည်း။ ဥပမာအားဖြင့်ဆာဟာရဟုလူသိများသည်။ သို့မဟုတ်သဲကန္တာရများ၊ များစွာသော CO2 အချိန်များတွင်တောနက်ကြီးများ။
ငါ AMT 2017 အတွက်ခန့်မှန်းထင်ပါတယ်
Juan Angel MORENO ဟုသူကပြောသည်
Global Warming ၏မှားယွင်းသောအသုံးချကစားနည်းသီအိုရီ! ဒါဟာအမြဲအတုအယောင်ဖြစ်ခဲ့သည်! ဒါဟာဒေါသထွက်!
အမှန်တရားကိုလူသိများသည်၊ ရိုးသားသောသိပ္ပံပညာရှင်များသည်အမြဲတမ်းထိုအရာကိုအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ ဤကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ရာသီဥတုကိုပြောင်းလဲစေသည့်အဓိကအေးဂျင့်မှာ၎င်းပတ်လမ်းပတ်လည်ရှိကြယ်သည်၎င်း၏သံလိုက်စက်ကွင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုဖြစ်သည်။
စွမ်းအင်နိမ့်ကျမှု (အနည်းဆုံး) နေရောင်ခြည်သုံးသံလိုက်စက်ကွင်းများသည်အားနည်းစေသောကြောင့်လေထု၏အထက်ပိုင်းအလွှာများသို့ရောက်ရှိနိုင်ခြင်း၊ နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်ကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တိမ်များထုတ်လုပ်ခြင်း၊ လေထု၏ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်မှုန်ဝါးစေခြင်း၊ တစ်နှစ်လျှင်လေထုသည်ဂျက်စီးစီးဆင်းမှုကိုအရှိန်မြှင့ ်၍ သမုဒ္ဒရာရေစီးကြောင်း၏လမ်းကြောင်းကိုပြုပြင်သည်။ ကမ္ဘာမြေ၏သံလိုက်အားနည်းခြင်းကိုဤအားနည်းချက်ကချက်ချင်းအရွေ့ပြောင်းရွေ့ခြင်းအပေါ်သက်ရောက်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်၊
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နိမ့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောလေထုပွင့်လင်းမြင်သာမှုလျှော့ချခြင်း၏ဖြစ်ရပ်သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှစ၍ ဖြစ်သည်။ သမုဒ္ဒရာများ၏အပူစွမ်းအင်အားနည်းချက်ကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်အချိန်လုံလောက်ပြီဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီကပူနွေးသောကာလ၏အဆုံးသည်ထင်ရှားပြီးအံ့ဆဲဆဲဖြစ်သည်။ ရာသီဥတုသည် ၂၀ ရာစုတွင်ကဲ့သို့ဖြစ်တော့မည်မဟုတ်။ ဒါပြီးသွားပါပြီ
အကယ်၍ စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းလာမည့်အနိမ့်ဆုံးနေရောင်ခြည်သံသရာစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်ပါကယခုမှ စ၍ အအေးကိုရှောင်နိုင်လိမ့်မည်၊ ၎င်းသည် ၉၅% သေချာသည်။
ဖြစ်နိုင်ခြေမှာ၊ အကယ်၍ ဒီအအေးသံသရာကုန်ပြီးသွားရင်ရာစုနှစ်နှစ်ခုမပြည့်မီကာလတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Holacene မှာကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးအရှည်ဆုံးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းရဲ့အားနည်းနေတဲ့အရှိန်အဟုန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောနောက်ရေခဲမြစ်တစ်ခု၏အစဖြစ်သည်ဟုပင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ဝင်ရိုးသည်လတ္တီတွဒ်မြင့်မားသည့်နယ်မြေများတွင်စုဆောင်းထားသောနှင်းနှင့်ရေခဲအရည်ပျော်မှုကိုနေရောင်ခြည်မှခွင့်မပြုပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်နှင့်အလွန်ဆင်တူသောကြောင့်ကမ္ဘာမြေသည်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀၀၀ တည်ရှိသည့် GLACIATION သို့ကျရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
JUAN ÁNGEL MORENO သို့စာပြန်ပါ
ညစ်ညမ်းသောလိမ်လည်မှု၊ ကျွန်ုပ်သည်မက်ဒရစ်တွင်အနှစ် ၂၀ နေထိုင်ခဲ့သည်။ ရာသီဥတုဆိုးရွားလှသည်။ နွေ ဦး ရာသီမရှိ၊ နှစ်သည်ဆောင်း ဦး ရာသီလည်းမရှိ၊ သုံးခုမရှိ။ ယခုနှစ်တွင်လည်း ၂၀၁၈ ယခုနှစ်နွေရာသီမရှိ၊ ဆွီဒင်ဒါမှမဟုတ်လုံးဝအေးခဲနေတဲ့နိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုဆိုတာမရှိဘူး၊
မစ္စတာ Juan Angel Moreno ပြောတာကသူပြောတာတွေကိုပြန်လည်ဖတ်တာကဒီသွင်ပြင်ထဲမှာသဲတွေကျန်ရစ်တဲ့သူတွေကိုထောက်ခံအားပေးတာသေချာတယ်။ Chemtrails နဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအေးစက်မှု။
NWO fuck ဆိုတဲ့!
စပိန်တစ်ခွင်လုံးတွင်နွေရာသီသည်ပုံမှန်ထက် ပို၍ ပူသည်